FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY ALIKA JACK-A-RANIAN - ALIKA
Alika mifangaro mifangaro Jack Russell Terrier / Pomeranian
Dew Drop (aka Dewy) ilay Jack Russell / Pomeranian mix (Jack-A-Ranian) ho alika olon-dehibe— 'Dew Drop dia zazakely kely mahafinaritra sy milalao. Tamin'ny faha-1 taonany, dia lasa olon-tiana kely tsy manam-pahalalana sy adaladala izy. Izy dia mazava ho lasa mpitarika ny kitaponay kely ary nandray ny fanampiana ny zandriny lahy Jack-A-Ranian, Dingo, hianatra ny tady. Izy dia mailaka sy mailaka ary manao namana tsara mihazakazaka. Adventurous izy ary tia mandeha an-tongotra mitaingina fiara amin'ny toerana vaovao. Fitsangatsanganana an-tongotra, morontsiraka, fialantsasatra sy maro hafa - tiany ny karazana traikefa nahafinaritra rehetra. '
Ny alika Jack-A-Ranian dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Jack Russell Terrier ary ny Pomeranian . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Endrika alika tarehy ho azy manokana Club = Jack-A-Ranian
IDCR = Fisoratana anarana amin'ny Canine®= Jackaranian
Olon-dehibe Jack Russell / Pomeranian mix (Jack-A-Ranian)
kely indrindra pincher chihuahua afangaro alika kely
'Ity i Dougie, mpiray tanindrazana Jack Russell / Pomeranian 11 herinandro antsika. Izy dia manana tarehy Pom mahafatifaty miaraka amin'ny toetran'i Jack Russell. Alika kely mahay izy! Ny tarehiny sy ny toetrany dia tena 'Zazalahy teo akaiky', ka tsy maintsy nomenay azy ny anarany! '
'Ity dia sary iray hafa an'i Dougie, Jack Russell / Pomeranian mpiray tanindrazana 11 herinandro! Miara-mipetraka amin'ny zanako malalako toa adala izy! Jereo ny tarehiny Pom kely miaraka amin'ny vatany Jack Russell! Tena mifangaro izy! '
Mpangaro Jack Russell / Pomeranian olon-dehibe (Jack-A-Ranian) mandry eo ambony latabatra kafe misy vera
Jack Russell / Pomeranian mifangaro (Jack-A-Ranian) toy ny alika kely ary ny kilalaony dia eo am-bavany
bulldog amerikana volontsôkôlà sy fotsy
Mango the Jack-A-Ranian (Jack Russell Terrier / Pomeranian mix) alika kely amin'ny 7 volana
Mango the Jack-A-Ranian (Jack Russell Terrier / Pomeranian mix) alika kely amin'ny 6 volana
Mango the Jack-A-Ranian (Jack Russell Terrier / Pomeranian mix) alika kely amin'ny 6 volana miaraka amin'ny baolina mena
Mango the Jack-A-Ranian (Jack Russell Terrier / Pomeranian mix) ho alika kely amin'ny 3 volana
Mango the Jack-A-Ranian (Jack Russell Terrier / Pomeranian mix) alika kely amin'ny 3 volana
Sary avy amin'ny alika Jack-A-Ranian 1
alika fohy bernard masina volo
chihuahua afangaro jack russell terrier
bulldog australianina vs bulldog anglisy